သူခိုးဖမ်းတဲ့ ည | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » သူခိုးဖမ်းတဲ့ ည
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Nov 4, 2013 in My Dear Diary, Short Story | 11 comments
ဟိုးတုန်းကပေါ့…ကျနော့်ဆရာနဲ့ အတူ ပျဉ်းမနား နှစ်ကျိတ်ရှစ်ဆူ တပေါင်းပွဲကပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဇာတ်အဖွဲ့ ပျဉ်းမနားတောင်ညိုဘက်မှာ ရုံပွဲတွေ လှည့်ကခဲ့ဘူးပါရဲ့ …။
ကျနော့်ဆရာက BSC ဘွဲ့ ရပြီးသား၊ ၀ါသနာပါလွန်းလို့ ဇာတ်ကနေတာ…။ စိတ်ထားကောင်းတယ်…ယဉ်ကျေးတယ်…။
ဆရာတပည့်အတွဲလဲညီခဲ့ ကြတယ်…ဘယ်လောက်အတွဲညီလဲဆို ဆရာ နှစ်ပါးကနေရင်း အရက်ခိုးမော့တာကအစ သူ့ အဖေမမြင်အောင် ကျနော်က တောင်ရှည်ပုဆိုး ၀တ်သလိုလိုနဲ့ ကာပေးတတ်တယ်…။
နေ့ ခင်းအိပ်ယာကနိုးရင် ထန်းတောထဲမှာ ထန်းရည် သွားသောက်ပြီး…ဇာတ်ရုံရှိရာကို လေးဘက်ထောက်ပြီး လာခဲ့ ကြတာလဲ အတူတူ…။ အဲ…နောက်ပိုင်းမကချင်တာလဲတူတယ်…
ဆရာက ခွန်းထောက်တောင်မဆိုနိုင်အောင်ကို အသံအားနည်းတယ်…။
ကျနော့်ကို တော်တော်ချစ်တယ်…ခေါ်ရင် သားလို့ ခေါ်တတ်တယ်…ဆရာနဲ့ ကျနော်ကြားမှာ ထူးထူးခြားခြားဆိုလို့ သူနဲ့ အတူကဘို့ စာချုပ်တုန်းကတော့ နှစ်ပါးသွာ့းရင် ဂျွမ်းမထိုးရလို့ စာချုပ်ထဲမှာ ထည့်ရေးဘူးတယ်…။
သူက ဂျွမ်းလုံးဝမထိုးတတ်ဘူး….အနုပညာစစ်စစ်အကပိုင်းကတော့ သွားမစမ်းနဲ့ ၊ ပါတ်မချက် ၁၀၀ ကလိုက်ရုံနဲ့ တော်ရုံလူ လန်ထွက်သွားမယ်…ဆရာ့ဆီက အကပညာကို အကုန်နီးပါးရခဲ့ လို့ ဘဲ ကျနော်သူများထက် ပွဲလည်တင့်ခဲ့တာ..။
ပျော်စရာတွေနဲ့ ဆရာတပည့်အတူကရင်း ပျဉ်းမနားတောင်ညိုဘက်မှာ ကဘို့ ဖြစ်လာတာလေ…ကျနော်တို့ က နောက်ပိုင်းမကဘူး…နှစ်ပါးမိုးလင်းအမြဲကတယ်…။ဒီအဖြစ်လေးဖြစ်ခဲ့တာက အဲဒီနယ်ဘက်မှာဘဲ ယိုးဒယား ဦးအောင်မြိုင်ရဲ့ ဇာတ်က ခါးပြတ်ပြီး ဇာတ်အဖွဲ့ ပျက်သလိုဖြစ်နေတာ..သူကဘဲနည်းမျိုးစုံနဲ့ သူ့ အဖွဲ့ သားတွေကိုရှာကျွေးနေတာ….။
ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ဆီရောက်လာပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ ညကြေးပေးပါ…သူနောက်ပိုင်းကပါရစေလို့ တောင်းဆိုလာတယ်..သူရတဲ့ ညကြေးနဲ့ သူ့ ဇာတ်အဖွဲ့ အတွက်စားစရိတ် ဖန်တီးရမှာမို့ ဘ၀တူခြင်း နားလည်ကူညီမှုနဲ့ကျနော်တို့ ဆီမှာ နောက်ပိုင်းကပြပေးဘို့ သဘောတူခဲ့တယ်…။
ဟိုးတုန်းကတော့ယိုးဒယားအောင်မြိုင်ဆိုတာ နာမည်ကြီးပါ…ဖြူဖြူနွဲ့ နွဲ့ နဲ့ ။ သူနာမည်ကြီးတာက ကိုးမြို့ ရှင်နဲ့ ပုလဲယဉ် နောက်ပိုင်း။
နောက်ဆုံး ဇာတ်တော်ပေါင်းသော်………နတ်ပင့်…နတ်က ဒ၀ါချက်( ပိုက်ဆံရှာ)ပေါ့…။
ကိုးမြို့ ရှင် ဇာတ်ထုပ်မှာ ပုလဲယဉ်ရဲ့ သား၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခွန်ချို ၊ခွန်သာ နေရာက ကပေးရမတဲ့ …။
မကချင်ပါဘူးပြောလဲမရဘူး…ဇွတ်။ ကြေညာထားပြီးပြီဆိုဘဲ…။ နောက်ပိုင်းမကချင်ပါဘူးဆိုမှ…။ ဆရာဆိုပွစိပွစိနဲ့ ပြောမဆုံးဘူး…။
“ ကွာ…ဒါကြောင့်လူကြီးတွေပြောတာသားရ…ခြေနှစ်ချောင်းလဲ မကယ်နဲ့မင်းလှေမျောလဲ မဆယ်နဲ့ တဲ့ …အခုကြည့်ပါဦး…”
“ ဟားဟား….အခုနတ်လှေကြီးကို ကျနော်တို့ ဆယ်မိသွားတာလေ”
“ ဖော်လိုဘဲ လိုက်ကြတာပေါ့ အကိုရာ…”
ဒီလိုနဲ့ ကဘို့ ဇာတ်ကွက်ချတာပေါ့…ကိုးမြို့ ရှင်က သားနှစ်ပါးကို ခွန်ချိုခွန်သာရေ…လို့ အော်ခေါ်မှ ရှမ်းဝတ်စုံတွေနဲ့ ထွက်ရမှာ…။
ကြားမှာ အချိန်တွေ ဟ နေသေးတော့ နှစ်ပါးဝတ်စုံတွေကို အေးဆေး ချွတ်လို့ ရတာပေါ့…။
နှစ်ပါးသွားပြီးတော့ဆရာတပည့်အေးဆေးပေါ့…ထွက်ရမယ့်အခန်းက နည်းနည်း အချိန်ရသေးတယ်။ဆရာက နှစ်ပါးပြီးတော့ ရုံပြင်ကို အပေါ့အပါးသွားဘို့ အဖော်ခေါ်တယ်..သူက သရဲ အားကြီးကြောက်တာ…။ နှစ်ပါးဝတ်စုံတွေနဲ့ ရုံပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ ဆောင်းလေအေးကို တွေ့ ရတာဘဲ ၊ မြူနှင်းတွေနဲ့ ဖုံးပြီး ခပ်ဝေးဝေးကို ဘာမှတောင်မမြင်ရပါဘူး…။
“ သူခိုးတော့်..သူခိုး…ကယ်ကြပါ…ကျမပိုက်ဆံသေတ္တာလူုသွားလို့ ပါ…သူခိုးသူခိုး” ဆိုတဲ့ အော်သံတိုးတိုးကို ကြားရတာဘဲ…။
ကျနော်တို့ ကလဲ ကြည့်နေတယ်ဆိုတာက သူခိုးလား၊ သူခိုးလိုက်သူလား ဘာမှ မသိသေးဘူး…။
ခဏဘဲကြာတယ်..အသက် ၆၀ကျော် အဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် “ သူခိုးတော့…သူခိုး” ဆိုပြီး အော်ရင်းလိုက်လာတာကို တွေ့ ရတာ…။ အဲဒီကျမှ လရောင်ရေးရေး လေးထဲမှာ ရမ်းစမ်းပြီး အဒေါ်ကြီးနားကို ဆရာတပည့်ပြိုင်တူ ပြေးသွားကြတာ..။
“ အမလေး….ပြောင်ပြောင်လက်လက်နဲ့ ဘာတွေတုန်း”
“ ဇာတ်မင်းသားတွေ…ခုနကပြေးသွားတာ သူခိုးလား..”
“ သေချာပါတယ်ကွယ်…ကျူပ်အော်နေတာ ဘယ်သူမှ မကြားလို့ ပါ”
အဒေါ်ကြီး စကားဆုံးတာနဲ့ ဆရာတပည့် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး..တိုင်ပင်ကိုက်ဘဲ တော်တော်ဝေးနေတဲ့ သူခိုးနောက် ကိုလိုက်တာပေါ့…။
“ ဟေ့ကောင်…မပြေးနဲ့ ..ငါတို့ လာပြီကွ”
“ ခွန်ချိုခွန်သာတဲ့ ဟေ့…”
“ ဟာ…အရေးထဲ ဘာတွေအော်နေလဲ…”
ရှေ့ ကသူခိုးကပြေး…နောက်က မင်းသားဝတ်စုံကြီးတွေနဲ့လိုက်..။
လယ်ကွင်းတွေထဲမှာ ခလုတ်ကလဲတိုက်…တခါတခါ လဲကျပေမယ့် ဆက်လိုက်တာဘဲ…။
လယ်ကွင်း ၄..၅ကွင်းလောက်ပြေးလိုက်ပြီးတာနဲ့ သူခိုးကိုမှီလာပြီး…နှစ်ယောက်သား ခုန်အုပ်လိုက်တာဘဲ..။
တောင်ရှည်ပုဆိုးတွေလဲ ကျွတ်ကျရင်းနောက်ဆုံး သူခိုးခြေထောက်ကို အဓိက ထားဖြုတ်တော့ သူလဲကျသွားမှ ဆရာက သူခိုးကိုဖက်ထားရင်း တက်ဖိထားတယ်…၊ ကျနော်က ဆရာ့အပေါ်ကတစ်ဆင့်တက်ဖိထားတာပေါ့..။
အဲလို ၃ယောက်ထပ်ရက် လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ် ရုန်းနေတုန်း…
“ ခွန်ချို သားတော်ကြီး…ခွန်သာရေ…”
“ အို…သားတော်တို့ဦးရီးတော်ဆီ လာကြပါဦး သားတော်တို့”
ယိုးဒယားဦးအောင်မြိုင် အသံက ဟိန်းထွက်လာတာ…သွားပြီ။
“ ကြိုက်သလောက်ခေါ်ဟေ့…ဒီမှာလွှတ်လို့ မှ မရတာ…သား…အော်ကွာ..သူခိုးလို့”
“ ဟာ…မင်းသားလေနဲ့ အော်မနေနဲ့…လူလို ကျယ်ကျယ်အော်..”
“ ဟမ်… သူခိုးဟေ့….သူခိုး…ဒီမှာမိထားတယ်ကွ”
သူခိုးကရုန်း ကိုယ်ကအော်နဲ့ …
“ ဟင်..သားတို့ သူခိုးမိထားတာလား…”
“ ဟုတ်တယ် မိထားတယ်…အဘွား…လူတွေ ခေါ်မလာဘူးလား”
“ အို…ခွန်ချိုရို့ ..ခွန်သာရို့ ….”
“ အဘွားလဲ နောက်ကဘဲ လိုက်လာတာကွယ်..မမြင်မစမ်းနဲ့ …နေဦး အခုပြေးခေါ်လိုက်မယ်”
“ မြန်မြန်နော်…အဘွား…ဒီမှာ အော်တာ အာခေါင်တွေတောင်နာနေပြီ”
“ ခွန်ချိုတို့ …ခွန်သာတို့ …”
ဟိုမှာလဲ သားတော်တွေ ခေါ်ထုတ်နေတာ ဆက်တိုက်ဘဲ…နည်းနည်းပါးပါး…အပြင်လေးဘာလေး ထွက်မကြည့်ကြဘူး…။
အဘွားကြီး လူတွေသွားခေါ်နေပြီဆိုတော့ ကျနော်လဲ ဆက်မအော်တော့ဘူးပေါ့…။
အဲဒီအချိန်ကျမှ နှင်းမှုန်တွေကြားမှာ ဇာတ်ရုံအပြင်ကိုထုတ်ထားတဲ့ လော်စပီကာကြီးကနေ…
“ ပွဲခင်းတာဝန်ရှိသူများနဲ့ လုံခြုံရေးများခင်မြားးးးးကျနော်တို့ ဇာတ်မင်းသား၂ယောက်ပျောက်နေပါတယ်၊ ဘယ်လိုမှ ခေါ်မရမှတော့ မင်းသားတွေကို ပြန်ပေးဆွဲသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်…တာဝန်ရှိသူများ ကူညီပေးကြပါ”
“ ဟာ…ဘာတွေ အော်နေတာလဲဟ…”
အဲဒီကျမှ တချိန်လုံး ဒေါသကြီးနေတဲ့ သူခိုးက သနားစရာ အသံလေးနဲ့ …
“ အကိုတို့ ရယ်…ကျနော် ပိုက်ဆံသေတ္တာဘဲ ခိုးတာပါဗျာ..အကိုတို့ ကို ပြန်ပေးဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူး…လူတွေလာရင် ကျုပ်တော့ သေပါပြီဗျာ”
“ အေး…တိတ်တိတ်နေ…..တို့ သိတယ်…မင်းသာထွက်မပြေးနဲ့ ”
သနားရအခက် လွှတ်ရအခက်နဲ့ကျနော်လဲ အပေါ်ဆုံးကနေပြီး တခွိခွိ ရယ်တာဘဲ…။
ခဏနေတော့ ဇာတ်ရုံထဲကလဲ ဓါတ်မီးတွေတ၀င်းဝင်းနဲ့ တစ်အုပ်ကြီး ထွက်လာကြသလို…ဈေးတန်းတွေဘက်ကလဲ မီးခွက်လေးတွေနဲ့ 
“ ပြန်ပေးဗျို့ …ပြန်ပေးသမား”
“ ဒီမှာဗျို့ ….ဒီမှာ”
လူတွေစုံကာမှ အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး သူခိုးကို အပ်လိုက်ရတာ…
မီးရောင်အောက်မှာကြည့်မှ ဆရာ့မှာ အောက်ခံ မင်းသားဘောင်းဘီဘဲ ရှိတယ်။ တောင်ရှည်ပုဆိုးနဲ့ ခေါင်းပေါင်းအရွက်က ဘယ်မှာ ကျန်ခဲ့ မှန်းတောင်မသိဘူး…ကျနော့်မှာလဲ ဖိနပ်မရှိတော့ဘူး…။
နောက်သူခိုးဖမ်းပွဲကြီးပြီးသွားမှ ပရိတ်သတ်ကိုလဲ ရှင်းပြရတယ်…။
ဈေးသည် အဘွားနဲ့ရွာလူကြီးတွေကလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အထပ်ထပ်ပြောကြတယ်…။
နောက်…မနက်မှာတော့ အဲဒီပျဉ်းမနား တောင်ညို ရွာလေးတစ်ဝိုက်မှာ သူခိုးဖမ်းတဲ့ ခွန်ချို ခွန်သာဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတာ။
ဟိုတုန်းကတော့ တက်ညီလက်ညီကို သူခိုးဖမ်းခဲ့ကြတာ…။
ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ဖမ်းခဲ့ပေမယ့် ခွန်ချိုခွန်သာက ကြားထဲက နာမည်ကြီးသွားတာ…။
တစ်ကယ်လို့ သာ အခုအချိန်မှာ ခွန်ချို ခွန်သာ သူခိုးဖမ်းနိုင်သေးလားမေးရင်တော့….။
အစိမ်းသေနဲ့ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ခွန်ချို ခွန်သာ နတ်ညီိနောင်တောင် လန့်ဖျတ်ပြီး အစိမ်းသေဘ၀ကို ၂ပြန်သေပြီး ၊နတ်သက်ကြွေသွားနိုင်တယ်။ ပြောလို့ တော့ ရဘူးရယ်..။
သရဲကြီးတော့ သဘက်၊ နတ်ကြီးတော့ ဗြဟ္မာ ၊ သူခိုးကြီးတော့ ဓါးပြ …တဲ့။
ခေတ်တွေက ပြောင်းသွားပြီလေ…။ ဟိုတုန်းက ဖမ်းခဲ့ကြတာ သူခိုးက တစ်ယောက်ထဲ..။
အခု ပျဉ်းမနားတစ်ဝိုက်မှာ သူခိုးကြီးတွေ ဓါးပြကြီးတွေပေါပုံများ…အစိမ်းရောင်လှိုင်းကြီး ထနေသလိုဘဲ…အုပ်စုလိုက်ကြီး…။
Catch them if you can..!
Thieves with green uniformss..!
အစိမ်း ရောင်သူခိုးများ ပေါ့ဗျာ
ဟဲ ဟဲ ဟဲ ၊ လူဇိုး ။
” အခု ပျဉ်းမနား တစ်ဝိုက်မှာ သူခိုးကြီးတွေ ဓါးပြကြီးတွေပေါပုံများ…
အစိမ်းရောင် လှိုင်းကြီး ထနေသလိုဘဲ…အုပ်စုလိုက်ကြီး…။
နန်းတော်ကြီးတောင် ဆောက်ထားတယ်ဆိုဘဲ…။ “
ကိုကျော်စွာခေါင် ပြောမှပဲ ရှင်းသွားတယ်..ဟီး
သူခိုးက အတော် တောင့်မယ့် သူခိုးပဲ နေမှာ …
ဆိုလိုရင်းကို စကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ 
လှစ်ခနဲ ပြသလိုက်ပုံက ပညာပါတယ်
သူခိုးကြီးတော့ ဓါးပြ တဲ့
ဓါးပြထက် ကြီးတာကျ ဘာခေါ်မလဲ ဗျာ
သေချာတာက ဒါတွေ ဓါးပြထက် ကြီးတယ် ဆိုတာပဲ ဟီဟိ
ဒါနဲ့ ဒါနဲ့ လေ
တောင်ရှည်ပုဆိုး ပြန် တွေ့ရဲ့လား ဟင်
အဲဒီ နောက်ပိုင်းရော အဆင်ပြေပြေ က ဖြစ်ရဲ့လား လို့
အားရပါးရရီလိုက်ရတာ။ အစောပိုင်းငိုချင်းတွေပြီးတော့ အခုလူပျက်အလှည့်ထင်ဘာ့။
မီးမီး မခိုးတတ်ဘူး ဦးဦးခေါင်။ မီးမီး အကြွေစေ့ဘူးလေးလည်းမပြည့်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီ ပန်းဂေါ်ဖီပွင့် တွေကို ပွဲခင်းထဲက ဦးဦးခေါင် ကောင်မလေးတွေကိုပေးဖို့ယူသွားတာပါ။ ဥစ်စာရင်း မှန်ရင် ဦးဦးခေါင်ဆီပြန်ရောက်မှာပါ။ ဦးဦးခေါင် ဆီမှာအမွေတောင်းထားတာလည်းမရသေးပါဘူး။ (ပညာအမွေ)။ ခိုးယူလို့လည်းမရ။ မီးမီး အဖြူအစိမ်း အထက်တန်းကျောင်းပြီကတည်းက မဝတ်တော့ပါဘူး။ ပျဉ်းမနားလည်း တစ်ခါတည်းရောက်ဖူးတာပါ။း(ဟိုဘက်ပို့စ်မှာ အားနာလို့ ဒီမှာပြန်ရေးတာ)
နယ်ဘက်က လူတွေ မင်းသားဆိုချစ်ကြတာများ သဲသဲလှုပ်…
ကိုမင်းသားသာဟုတ်ပါတယ်..ပြန်ပေးဆွဲပါတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ကတော့ …အဟိဟိ …စကားမစပ်.ကိုမင်းသား….သူခိုးဖမ်းတာ တည်တည်တံ့တံ့ဖမ်းလို့ရဘူးရားဟင်…..အဟီးဟီး…ရီရလို့သေတော့မယ်…